samedi, 19 octobre 2019 20:26
Kitra – CHAN: Namibia 2 # 0 Madagasikara
Niondrika tamin’ny isa 0 noho 2 ny Barea CHAN nanoloana an’ny Brave Warriors Namibiana, tamin’ny lalao miverina notanterahina tao amin’ny kianja Sam Nujoma Stadium androany sabotsy 19 oktobra 2019 tolakandro. Manatombo amin’ny isa ry zareo Namibiana na dia nandresy 1 noho 0 aza ny Barea CHAN amin’ny lalao mandroso. Nifarana teo ny dian’i Madagasikara hahazoana tapakila ho an’ny Cameroun amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika ifaninanan’ireo ekipam-pirenena rafetin’ny mpilalao ao an-taniny avy, na ny CHAN 2020. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 18 octobre 2019 15:59
Kitra - Barea CHAN: Nitsapa kianjan’ny Sam Nujoma Stadium
Efa any Namibia maka volontany, ary efa niatrika fanazarantena, nitsapa kianjan’ny Sam Nujoma Stadium ny Barea, hiatrehana ny lalao miverina amin’i Nambia hatao rahampitso. Efa nandresy 1 noho 0 ny Barea tamin’ny lalao mandroso tetsy Mahamasina, Madagasikara. Ady sahala dia ampy hahazoan’ny Barea tapakila hiazoana an’i Cameroun hiatrehana ny CHAN 2020. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 18 octobre 2019 12:20
« Kick Boxing » - Tompondaka erantany: Efa teny Ivato no tsy lasa ireo « Kickers » hiaro ny voninahi-pirenena
Hotanterahina any Sarajevo renivohitr’i Bosnie ny 19 hatramin’ny 27 oktobra 2019 ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja « Kick Boxing ». « Kickers » enina mianadahy, dimy lahy sy vavy tokana, no hiaro ny voninahi-pirenena rehefa nomanina nandritra ny efa-bolana. Ny alakamisy tamin’ny 3ora maraina ny delegasiona malagasy no voatondro hiala an-tanindrazana hiazo an’i Sarajevo. Tonga teny tokoa ireo « Kickers » saingy tsy afaka niakatra anaty fiaramanidina tokony horaisina hiazo an’i Nairobia Kenya, mandalo an’i Qatar, tonga any Sarajevo noho ny tsy fahampian’ny taratasy rehefa natao ny fanamarinana nialoha ny fiondranana. Kepoka ireo « Kickers » efa nanantena hiainga, hiaraka fiara-manidina amin'ireo mpiray tanindrazana ao amin’ny Barea CHAN, hiaro ny voninahi-pirenena any Namibia.
jeudi, 17 octobre 2019 21:47
Kitra – CHAN 2020: Nanainga androany maraina niazo an’i Namibia ny Barea
Nialoha ny niaingan’izy ireo dia tonga tetsy amin'ny Ivotel Ambohidahy-Antananarivo, nipetrahan’ireo mpilalaon’ny Barea tamin’ny fampivondronana azy ireo, nitsodrano ny delegasiona malagasy nanainga ho any Namibia ny filohan'ny Federasiona malagasy ny baolina kitra, Arizaka Raoul sy ny mpikambana ao amin'ny komity mpanantanteraka omaly hariva. Tamin'ny 3 ora maraina, ity andron’ny alakamisy 17 oktobra 2019 ity ny Barea CHAN no nanainga teny Ivato hiatrika ny lalao miverina amin'i Namibia ny 19 oktobra 2019, hahazoana ny tapakila hiatrehana ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra ifaninanan’ireo mpilalao tsy mpilaravinahitra.
dimanche, 13 octobre 2019 17:09
Eliud Kipchoge: Mpihazakazaka lavitrezaka haingam-pandeha indrindra manerantany
Horaiketin’ny tantara ny zava-bitan’ilay atleta teratany kenyana Eliud Kipchoge. Izy no olombelona voalohany nahavita ny hazakazaka lavitrezaka 42,195 km latsaky ny adin’ny roa ora. 1 ora 59 min 40 s no nahavitany io halaviran-dalana io, omaly sabotsy 12 oktobra 2019, tany Vienne renivohitr’i Autriche. 34 taona izao i Eliud Kipchoge. Izy no tompondaka olimpika farany, ary tompon’ny zava-bita tsara indrindra manerantany amin’io taranja atletisma hazakazaka lavitrezaka io, vitany tao anatin’ny 2 ora 1 min 39 tany Berlin Alemaina. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 13 octobre 2019 16:32
"Sport Scolaire" Nasionaly: Atleta 64 no hiaro ny voninahitr’i Matsiatra Ambony
Hotanterahina eto Toamasina ny 14 ka hatramin’ny 20 oktobra 2019 ny fifaninanana nasionalin'ny fanatanjahantena an-tsekoly "Sport scolaire national" ho an'ity taona ity. 2 000 mahery ireo mpandray anjara, izay avy amin’ny sekoly miisa 130 manerana ny Faritra 22 amin’izany. Miisa 85 ny solotenan'ny Faritra Matsiatra Ambony ka mpifaninana ny 64 amin'ireo. Nanolotra ny Fanevan'i Mahatsiatra Ambony ny mpitarika ity Delegasiona ity ny Governora ary nitso-drano am-bavaka azy ireo hitondra ny amboara.
dimanche, 13 octobre 2019 16:08
Antsiranana: Mampiantrano ny fifaninana ara-panatanjahantena natokana ho an'ny mpiasam-panjakana
Nisokatra ofisialy ny sabotsy 12 oktobra 2019 eto Antsiranana ny ASIEF, na ny fifaninana ara-panatanjahantena natokana ho an'ny mpiasam-panjakana. Efa nanomboka tamin'ny 8 oktobra 2019 ny fifanintsanana, ary amin'ny 19 oktobra 2019 ny famaranana ny lalao rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 13 octobre 2019 16:00
Kitra-Lalao fanomanan-tena: Barea CHAN 2 # 0 Sélection Analamanga
Nandresy tamin’ny isa 2 noho 0 ny Barea CHAN nanoloana ny ekipa voafantina Analamanga nandritra ny lalao fitsapana natao teo amin’ny kianjan’ny Elgeco Pus by-Pass ny sabotsy 12 oktobra 2019, tolakadro. Lalao telo, fandresena telo ho an'ny Barea CHAN tao anatin’ireo lalao fanomanan-tena natrehiny mialoha ny hiazoany an’i Namibia amin’ny lalao miverina hifanandrinany amin’i Namibia ny sabotsy 19 oktobra 2019 ho avy izao. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 09 octobre 2019 22:11
Kitra - Lalao fitsapana: Barea CHAN 3 - 1 Elgeco Plus
Nisaraka tamin’ny isa 3 noho 1 ny Barea CHAN sy ny ekipan'ny Elgeco Plus androany nandritra ny lalao fitsapana ny ekipam-pirenena Malagasy notanterahina tetsy amin’ny kianjan’ny Elgeco Plus eny By pass – Antananarivo ny tolakandro teo. Nivoaka ho mpandresy ny Barea CHAN tamin’ity lalao fitsapana faharoa natrehiny ity, tafiditra amin’ny fanomanana ny lalao miverina hifanandrinana amin'i Namibia amin’ny 18 oktobra 2019. Afa-po amin’ny ezaka sy ny fivoarana nasehon’ny mpilalao androany i Franklin, mpanazatra. Efa nandresy 2 noho ny 0 ny Zanakala FC tamin’ny lalao fitsapana voalohany notanterahina ny Barea CHAN tamin’ny Alahady lasa teo. (Jereo Sary Tohiny)